Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Canne-ka Daaweynta Dhaqancelinta Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Baxnaaninta iyo Jimicsiga > Daawaynta Baxnaaninta Cane
Daaweynta Baxnaaninta Cane waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ku jira daawada baxnaanintu, waana hab muhiim ah oo baxnaanin loogu sameeyo bukaanada qaba cudurrada, dhaawaca iyo naafada.
Daawaynta Baxnaaninta Cane inta badan waxaa lagu daraa daaweynta daroogada, daawaynta qaliinka iyo daawaynta kale ee kiliinikada. Kahor daawaynta baxnaaninta, bukaanada qaba cudurada, dhaawaca iyo naafanimada waa in lagu qiimeeyaa baxnaaninta, ka dibna waa in la sameeyaa qorshe daaweyn baxnaanin ah oo la go'aamiyo, kaas oo ay fuliyaan kooxda baxnaaninta oo ka kooban daaweeyayaasha baxnaaninta iyo shaqaalaha caafimaadka kiliinikada oo udub dhexaad u ah dhakhaatiirta baxnaaninta, iyo la soo koobay, la qiimeeyay oo si joogto ah loo hagaajiyay habka hirgelinta ilaa dhamaadka daawaynta.
Daawaynta Baxnaaninta Cane waxay leedahay waxyaabo badan (ay ku jiraan adeegyada caafimaadka, shaqada, bulshada iyo kuwa kale ee daaweynta iyo tababarka). Cutubkani wuxuu diiradda saarayaa daaweynta jireed, daaweynta shaqada, daaweynta hadalka, teraabiyada cilminafsiga, injineernimada dhaqancelinta iyo daaweynta dhaqameed ee Shiinaha ee qaybta dhaqameed ee daawada dhaqancelinta.
Dadka da'da ah waxay isticmaalaan ulaha suuqa jira ee qaab dhismeed fudud, hal shaqo, ma awoodaan inay ogaadaan shaqada sida kormeerka waqtiga-dhabta ah, caawinta wakhtiga, sababtoo ah sannadihii ugu dambeeyay waayeelka ma heli karaan gargaar waqtigeedii ah iyo xaaladda dadka waayeelka ah ayaa lumay in ka badan iyo in ka badan. , si loo hubiyo badbaadada safarka dadka waayeelka ah, xaalad degdeg ah waxay heli kartaa caawimo waqtigeeda ah, waxay fududaynaysaa kormeerka wakhtiga iyo raadinta. Warqadan, MCU 89C52 oo ah kantaroolka ugu weyn, naqshadeynta booska GPS, telefoonka wac, nidaamka alaarmiga, iftiinka LED, MP3 iyo hawlaha kale ee Aluminium Alloy Four Claw Crutch, naqshadeynta waa mid fudud, qiimo jaban, waxay leedahay waxqabad xoog leh. iyo qiimaha suuqa.
Usha Socodka ah ee Hal-abuurka ah ee Birta ah
Dadka da'da ah waxay isticmaalaan ulaha suuqa jira ee qaab dhismeed fudud, hal shaqo, ma awoodaan inay ogaadaan shaqada sida kormeerka waqtiga-dhabta ah, caawinta wakhtiga, sababtoo ah sannadihii ugu dambeeyay waayeelka ma heli karaan gargaar waqtigeedii ah iyo xaaladda dadka waayeelka ah ayaa lumay in ka badan iyo in ka badan. , si loo hubiyo badbaadada safarka dadka waayeelka ah, xaalad degdeg ah waxay heli kartaa caawimo waqtigeeda ah, waxay fududaynaysaa kormeerka wakhtiga iyo raadinta. Warqadan, MCU 89C52 oo ah kantaroolka ugu weyn, naqshadeynta meelaynta GPS, telefoonka wac, nidaamka alaarmiga, nalalka LED, MP3 iyo hawlaha kale ee Birta aan lahayn ee Hal Lift Walking Stick, naqshadeynta waa mid fudud, qiimo jaban, waxay leedahay awood xoog leh. wax ku ool ah iyo qiimaha suuqa.
Aluminium Alloy Keli ah Kiish Crutch
Dadka da'da ah waxay isticmaalaan ulaha suuqa jira ee qaab dhismeed fudud, hal shaqo, ma awoodaan inay ogaadaan shaqada sida kormeerka waqtiga-dhabta ah, caawinta wakhtiga, sababtoo ah sannadihii ugu dambeeyay waayeelka ma heli karaan gargaar waqtigeedii ah iyo xaaladda dadka waayeelka ah ayaa lumay in ka badan iyo in ka badan. , si loo hubiyo badbaadada safarka dadka waayeelka ah, xaalad degdeg ah waxay heli kartaa caawimo waqtigeeda ah, waxay fududaynaysaa kormeerka wakhtiga iyo raadinta. Warqadan, MCU 89C52 oo ah kantaroolka ugu weyn, naqshadeynta booska GPS, telefoonka wac, nidaamka alaarmiga, iftiinka LED, MP3 iyo hawlaha kale ee Aluminium Alloy Single Lift Crutch, naqshadeynta waa mid fudud, qiimo jaban, waxay leedahay waxqabad xoog leh. iyo qiimaha suuqa.
Usha lagu socdo ee aluminium la hagaajin karo
Dadka da'da ah waxay isticmaalaan ulaha suuqa jira ee qaab dhismeed fudud, hal shaqo, ma awoodaan inay ogaadaan shaqada sida kormeerka waqtiga-dhabta ah, caawinta wakhtiga, sababtoo ah sannadihii ugu dambeeyay waayeelka ma heli karaan gargaar waqtigeedii ah iyo xaaladda dadka waayeelka ah ayaa lumay in ka badan iyo in ka badan. , si loo hubiyo badbaadada safarka dadka waayeelka ah, xaalad degdeg ah waxay heli kartaa caawimo waqtigeeda ah, waxay fududaynaysaa kormeerka wakhtiga iyo raadinta. Warqadan, MCU 89C52 oo ah kantaroolka ugu weyn, naqshadeynta booska GPS, taleefanka wac, nidaamka alaarmiga, nalka LED, MP3 iyo hawlaha kale ee Aluminium-ka laalaabida laalaabida ee usha lugaynta, naqshadeynta waa mid fudud, qiimo jaban, waxay leedahay waxqabad xoog leh iyo qiimaha suuqa.
Ulaha Socodka ee Afar Lugood La Isku Halayn Karo
Ulaha Socodka ee Naafada ah ee Afar Lugood La Isku Halayn Karo, Inta badan ul alwaax ah ama bir ah oo gacanta ku leh dusha sare taas oo u dhaqanta sidii "lug saddexaad" si ay u xasiliso jirka markaad socoto. Hadda waxa kale oo jira saddex-ama afar-lugood, oo loogu talagalay saamaynta ka-hortagga barafka, qaarna waxaa lagu daraa saxaro yar oo laablaaban. Caadi ahaan waxaa isticmaala waayeelka iyo naafada.
Jeexdin Afar Lugood ah
Crutches Four Legged waa qalab fudud, sida caadiga ah alwaax ama ul bir ah oo dusha sare leh oo u dhaqma sida "lug saddexaad" si loo dejiyo jirka markaad socoto. Hadda waxa kale oo jira saddex-ama afar-lugood, oo loogu talagalay saamaynta ka-hortagga barafka, qaarna waxaa lagu daraa saxaro yar oo laablaaban. Caadi ahaan waxaa isticmaala waayeelka iyo naafada.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Daawaynta Baxnaaninta Cane oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Daawaynta Baxnaaninta Cane soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Daawaynta Baxnaaninta Cane la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.